Pleistocene fauna: njirimara na evolushọn | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge nke Pleistocene bụ nke mbụ geological nkewa nke Oge quatary. Ihe kacha jupụta ya bụ okpomoku nke kpuchiri ụwa niile na ice. Na Pleistocene anụmanụ ejiri mara ya nke bu ihe anumanu buru ibu dika mammoth. Anyị na-ahụkwa n'oge a oge mgbanwe nke ụdị mmadụ. Ọ bụ n'oge a ka ndị nna ochie nke mmadụ nke oge a pụtara.
N'isiokwu a anyị ga-enyocha njirimara na ntopute nke anụmanụ Pleistocene.
1 Ihe omuma banyere uzo Pleistocene
2 Pleistocene anụmanụ
Ihe omuma banyere uzo Pleistocene
Iji ghọta mmepe nke anụmanụ Pleistocene, anyị ga-agarịrị n’ozuzu oke, ma ihu igwe, ma nke geology, wdg. Ọ bụ oge nke bu otu n’ime ndi amụrụ ihe ma nwee nke kachasi ihe ndekọ. N'ihi nke a, ọ ghọrọ otu n'ime oge mgbe enwere ozi buru ibu ma sie ike ntụkwasị obi. Oge a malitere Afọ 2.6 nde gara aga wee gwụchaa mgbe afọ ikpeazụ ice gachara, ihe dịka 10.000 BC
N'ime oge a nile, nnukwu anụmanụ ndị ahụ nwere ọmarịcha ịma mma ha, n'ihe banyere mmepe na ngbasawanye. Otu n'ime ha bụ nnukwu, megatherium na mastodons nke chịkwara ihe niile na ụwa. Njirimara nke mere ka ha di iche na ndi ozo nke umu anumanu bu oke ha. Anyi aghaghi ikwu okwu banyere mmepe nke ndi nna ochie mmadu dika Homo erectus, Homo habilis, na Homo neanderthalensis.
Banyere geology, anyị chọpụtara na enwere obere ebe obibi nke kọntinent. N'okwu a, oke ikuku kọntinent ahụ dị ntakịrị ma ọ dị otu ahụ kemgbe ahụ. Ugbua n'oge a, kọntinent nwere otu ọnọdụ ha nwere taa. Inyocha ihu igwe anyị na-ahụ na enwere oke okpomọkụ. Ma ọ bụ na n'oge a, ọtụtụ usoro ịgba ọkụ mere. Ọ dị otu a oge niile ruo mgbe afọ ikpeazụ ice gwụrụ. Ọtụtụ n'ime ụwa kpuchiri ice. Ndị ọkachamara edegoro na ihe dịka 30% nke ụwa dum dị na oyi. Osisi ndịda dị na Antarctica kpuchitere kpamkpam na ice dị ka taa. Ala nile nke Arctic Circle dịkwa ebe ahụ.
Ozugbo anyi nyochara onodu nke oge a, anyi amalite itule ihe ndi ozo nke Pleistocene.
N'oge a, ọ bụ anụmanụ ndị na-enye ara mmiri ghọrọ ndị na-achị achị. Nọgide na-enwe usoro nlekọta niile nke malitere n'oge gara aga. Na umu anumanu nke Pleistocene, mmeputa ihe a na-akpọ megafauna pụtara ìhè. Nke a megafauna na-ezo aka anụmanụ buru ibu ndị nwere ike iguzogide obere okpomọkụ dị n'oge ahụ.
Agbanyeghi na anumanu bu mmepe kachasi nwegasie ike nke umu anumanu nke oge a, umu anumanu ndi ozo dika nnunu, amphibians na ihe ndi ozo na-achikota. Ọtụtụ n'ime anụmanụ ndị a dịgide ruo taa. Agbanyeghị, enweghị ike ịgbagha na anụmanụ ndị na-enye ara bụ ndị eze nke oge a.
Ihe Pleistocene megafauna nwere nnukwu anụmanụ. N'ime anụmanụ ndị a ka anyị gosipụtara ndị nnọchi anya kachasị na ihe nile, na megatherium, na smile, na elasmotherium, n'etiti ndị ọzọ. Anyị ga-enyocha otu na anụmanụ ndị bụ isi nke anụmanụ Pleistocene.
Anụmanụ ndị a bụ nke ụdị Mammuthus ma yie elephant taa. Otu n’ime njirimara ndị kacha nwee otu a bụ ịgbatị imi ya. Nke a bụ n'ihi na ha so n'usoro Proboscidea ma nwee akụkụ ahụ nke akpọrọ akpati. Aha sayensị ya bụ proboscis. Ndị mammoths nwekwara ogologo oge, nkọ nkọ nke nyeere aka ịgbachitere ndị nwere ike ịdaba. Azụ ndị a nwere ngọngọ nke na-eme ka ha gbagoo. E ji ọdụ́ ndị a mee ọdụ́ ndị a.
Dabere na mpaghara nkesa nke onye ọ bụla na ọbịbịa ma ọ bụ nso nke ebe ndị nwere okpomọkụ dị ala, a na-eji aji ma ọ bụ obere aji kpuchie ahụ. Omume ya ma ọ bụ nri ya bụ ahịhịa ahịhịa. Nke a na-eme ka fangs nwee naanị ọrụ nchebe. N'agbanyeghị ọdịdị ya dị ukwuu na nke ndị otu Pleistocene megafauna, ọ lara n'iyi n'oge na-eso ya. Site na otutu ihe edeturu ala, enwere ike imata otutu ihe banyere ndu na ndu nke umu a.
Mụ anụmanụ ndị a dị n'usoro Pilosa ma nwee njikọ na sloths dị ugbu a. Ọ bụ ụdị anụmanụ mechara bụrụ nke kachasị ukwuu n’ụwa. Ogologo ịdị arọ ya bụ n’agbata tọn 2.5 na 3 ma buru ihe dị ka mita isii n’ogologo. Beendị a amụọla ekele maka fosili ndị anakọtara. Ọkpụkpụ ya siri ike, ya mere ana-enyo enyo na ọ ga-akwado anụ buru ibu.
Dị ka sloths taa, ha nwere mkpịsị ụkwụ toro ogologo. A na-ejikarị mkpịsị ụkwụ a eme ihe maka nri. Nri ha juputara na viper ma echee na ha nwere omume ndi ozo. Ahụ kpuchiri ahụ site na ajị anụ siri ike nke nyere aka chebe ya pụọ ​​na okpomọkụ dị ala n'oge ahụ. Mpaghara South America gbatịrị ebe obibi ya na nkesa ya.
Anumanu a bu nke ndi Felidae, buru ndi ikwu nke ugbu a. Ihe njiri mara ya bụ nnukwu nha ya na nku abụọ ya toro site na agba ya. N'ihi njirimara ndị a, amalitere ịmụmụ ọnụ ọchị n'ụwa niile dịka »Agụ owuru Saber». Ọ bụ otu n'ime anụmanụ ndị a kacha mụọ n'akụkọ ihe mere eme niile n'ihi na ọ dịkwa n'ọtụtụ akụkọ na akụkọ ifo.
N'ihi fosilili ndị a chịkọtara site na ụdị ndị a, ụmụ nwoke nwere ike iru ihe ruru kilogram 300 n'arọ. Ha biri karịsịa na mpaghara niile nke North na South America.
Ọ bụ otu n'ime anụmanụ na-enye ezinụlọ nke Rhinocerotidae, nke metụtara rhinos ugbu a. Ihe njiri mara anụmanụ ndị a bụ na ha nwere mpi buru ibu nke siri na okpokoro isi ha pụta na nke ruru ihe karịrị mita abụọ. Nri ha bụ ahịhịa ahịhịa na nri ha bụ ahịhịa.. Dị ka ọ dị n'ụmụ anụmanụ ndị ọzọ Pleistocene, ọ nwere ahụ nke ajị anụ siri ike kpuchie. Ebe obibi ya na ebe nkesa ya dị na etiti etiti Eshia na steepụ Russia.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Pleistocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Pleistocene anụmanụ